Kucheka nekuPetera Makomba eTextile Ventilation MaDhi neLaser - Goridhe Laser
Kucheka uye Perforating Makomba eTextile Ventilation MaDhi neLaser
Lightweight, ruzha Absorção de ,gua, utsanana zvinhu, nyore kuchengetedza, zvose zvinhu izvi vakawedzera kusimudzira rejira jira vakapararira hurongwa mumakore gumi apfuura. Nekuda kweizvozvo, kudiwa kwemachira emhepo kupararira kwakawedzerwa, izvo zvakadenha kugadzirwa kwemuchina wefekitori yemhepo yekupararira fekitori.
Nomazvo uye mukuru-kunyatsoshanda kuti Laser nokuveza anogona kurerutsa maitirwo kugadzira jira.
Kune ekuparadzira emhepo maficha, pane anonyanya kuve maviri chaiwo zvinhu, simbi uye machira, echinyakare simbi mutsipa masisitimu anoburitsa mweya kuburikidza nedivi-yakaiswa simbi diffusers. Mhepo inoendeswa kunzvimbo dzakananga zvichikonzera kusanganisa kwakanaka kwemhepo munzvimbo inogarwa uye kazhinji zvichikonzera kunyorwa uye kupisa kana kutonhora nzvimbo; nepo iyo jira mweya yakapararira iine yunifomu maburi pamwe nehurefu hwese hwekupararira system, ichipa inoenderana uye yunifomu mweya kupararira munzvimbo inogarwa. Dzimwe nguva, maburi-akapetwa maburi pane zvishoma zvinokwanisika kana zvisingapindike zvidhoma zvinogona kushandiswa kuendesa mweya zvakanyanya pane yakaderera velocity. Yunifomu yekupararira kwemhepo inoreva kusanganiswa kwemhepo kuri nani kunounza mashandiro akanaka enzvimbo idzo dzinoda kufefeterwa nemhepo.
Iyo jira rekuparadzira mweya zvirokwazvo iri nani mhinduro yekufefetera nepo chiri chinetso chikuru kugadzira maburi anogara aripo pamayadhi makumi matatu pakureba kana kutopfuura machira uye unofanirwa kucheka zvidimbu kunze kwekugadzira maburi. Laser chete ndiyo inogona kuona maitiro aya.
Goldenlaser yakanyatsogadzirirwa CO2 laser michina inozadzisa iyo chaiyo yekucheka uye perforating yemachira kufefetedza ducts dzakagadzirwa nehunyanzvi machira.
Zvakanakira Laser Kugadziriswa KweMachira Ventilation MaDhi
Smooth uye yakachena yekucheka mativi
Kucheka maburi ekupararira anogara achienderana nemufananidzo
Conveyor hurongwa otomatiki kugadzira
Kucheka, kupora uye micro kupora mune imwechete kushanda
Flexible kugadzira - cheka chero saizi uye zvimiro sekugadzirwa
Hapana chishandiso chekupfeka - ramba uchicheka mhando nguva dzose
Otomatiki chisimbiso chemativi akachekwa chinodzivirira kutapudza
Nomazvo uye kutsanya kugadzira
Hapana guruva kana kusvibiswa
Mhando dzeCustom Fabric Duct Zvishandiso zveMhepo Kupararira Inokodzera Laser Kucheka uye Perforating
Polyether Sulfone (koira), Polyethylene, Polyester, zvinhu zvenaironi, Glass Fiber, etc.
Laser Machine Kurudziro
Galvo uye Gantry Integreted CO2 Laser Machine
• Inoratidzira gantry laser (yekucheka) + inomhanya galvanometric laser (yekuzora nekumaka)
• otomatiki kugadzirisa zvakananga kubva mupumburu nerubatsiro rwekudya, conveyor uye ichitenderera masisitimu
• Perforation, micro perforation uye kucheka neakanyanya kunyatso
• Yekumhanyisa-yekumhanyisa yekucheka kwemakomba mazhinji ekuzora mukati menguva pfupi
• Inoenderera uye izere-otomatiki yekucheka macircuit easingaperi marefu
• Yakanyatso gadzirirwa laser maitiro eanokosha machira uye ehunyanzvi machira
Isu tinofara kukuraira iwe zvakawanda nezve Laser Kucheka Mucheka MaDhi uye Laser Perforating Makomba paMachira MaDhi.